बुद्धको पाईला जसले सेयर गर्छ उसलाई ७ दिन भित्रै निकै ठूलो खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ!ॐ: लेखि सेयर गर्नुहोस् मनोकामना पुरा हुनेछ ! – Namaste Host
April 4, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on बुद्धको पाईला जसले सेयर गर्छ उसलाई ७ दिन भित्रै निकै ठूलो खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ!ॐ: लेखि सेयर गर्नुहोस् मनोकामना पुरा हुनेछ !
यसको बिस्तृत ब्याख्या महाभारतको युद्द पछी भीष्मपितामहले युधिष्ठिरलाई उपदेश दिने क्रममा गरेका छन्। यो लोकमा सुख सान्ति र सम्रिद्दी चाहनेले आमालाई सेवा सब्द र सम्मान वाट प्रशन्न तुल्याउनुपर्छ । जन्म दिनमा अष्ट चिरंजिविको पुजा गरि दिर्धजीवनको कामना गरिन्छ। देवीदेवताको दर्शन,प्राथना-स्तुतिगान गर्ने, दिन दुखि लाई दान दिने कार्य गरि पवित्र र आनन्दित बन्ने प्रयास गरिन्छ । सामुहिक भेटघाट गरेर खुसि बाडिन्छ, आशिर्बाद लिईन्छ र असल जीवन जिउने जीवन बिताउने दृढ संकल्प गरिन्छ। यस दिनका कार्यले बर्ष भरि उर्जा दिनेहुनाले शुभ र असल कार्यमा ध्यान दिईन्छ ।भिडियो हेर्नुहोस।
April 6, 2021 April 6, 2021 Bijay Lama
सपना र बिनयको साथीले मुख खोले,बिनयलाई र,क्सिले बि,गार्यो,यो अ,न्तिम मौका हो (भिडियो सहित)